ပျော်ရွှင်ပါစေ...MERRY CHRISTMAS ! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျေးဇူးကြီးလှသော ဖေဖေနှင့်မေမေ၊ကျွန်တော်၏ချစ်သူ၊ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ သတ္တဝါအားလုံးနှင့်ကျွန်တော့်၏ခင်မင်ရသောသူငယ်ချင်းများ ၊ကျွန်တော့်၏ ဘလော့သူငယ်ချင်းများ၊
ယခုဒီပို့(စ်)လေးကို ဖတ်နေသောသူငယ်ချင်းများ၊ကျွန်တော့်၏သင်ဆရာ၊မြင်ဆရာအားလုံး၊ CHRISTMAS...နှင့်အတူ"ကောင်းချီးမင်္ဂလာ ရောက်ပါစေ..."
1 Response to ပျော်ရွှင်ပါစေ...MERRY CHRISTMAS !
ခရစ်စမတ် သီချင်းလေး နားထောင်သွားပါတယ်... နားထောင်လို့ အရမ်းကောင်းတယ် မြူးမြူးလေ :D